पेटमा बोसोको मात्रा बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? यही हुनुहुन्छ भने पढ्नुस घटाउने घरेलु उपाए-Brtnepal.com
Loading... पेटमा बोसोको मात्रा बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? यही हुनुहुन्छ भने पढ्नुस घटाउने घरेलु उपाए
Published on August 8, 2016 at 4:22 am
तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान सेवन गर्नुहोस् । यसबाट तपाईँको मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्नमा पनि मद्दत मिल्छ ।
काँचो लसुन खानुहोस । बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट शरीरको रक्तप्रवाह पनि सुचारु हुन्छ । यसले शरीरलाई निकै फाइदा पनि गर्छ ।
बदाममा भिटामिन इ तथा प्रोटिनका अलावा फाइबरको मात्रा अधिक मात्रामा हुन्छ । यसको सेवनले पेट लामो समय सम्म भरिएको अनुभूति हुन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा बढी भए पनि मोटाई भने बढाउँदैंन ।
यदि तपाईँ पेटको बोसो कम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मिठाईबाट टाढा रहनुहोस् । मिठाई तथा तैलीय पदार्थबाट टाढा रहनुहोस् । यस्ता खाद्य पदार्थले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा गर्छ । यस्तो बोसो पेट, तिघ्राजस्ता शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा हुने गर्छन् ।
यदि तपाईँ भात खानमा सोखिन हुनुहुन्छ भने सेतो चामलबाट टाढा रहनुहोस्, त्यसको स्थानमा खैरो चामलको भात खानुहोस् । यसका अलावा आफ्नो खानामा ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य पदार्थ सामेल गर्नुहोस् ।
मांसाहारी भोजनमा बोसोको मात्रा निकै हुन्छ । यो बोसो शरीरमा जम्मा हुन्छ, जसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । यदि वास्तवमै तपाईँ तौल कम गर्न चाहनुहुन्छ भने मांसाहार छाडेर शाकाहारी भोजन गर्नुहोस् ।
खानामा फल र सागसब्जी सामेल गर्नुहोस् । बिहान बेलुकी एक कचौरा फल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट तपाईँको पेट भरिन्छ र एन्टीअक्सिडेन्ट, मिनरल्स र भिटामिन पनि प्राप्त हुन्छ ।
खाना पकाउँदा तौल बढाउने खालका मसला पनि प्रयोग नगर्नुहोस् । दालचिनी, अदुवा तथा मरिचको प्रयोग खानामा अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस् । यी मसाला स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले तपाईँको इन्सुलिन क्षमता बढाउँछ र चिनीको मात्रा पनि कम गर्छ
क्यान्सर पिडित १२ बर्षीय छोराको उपचार गर्न नसकेपछि सहयोगको याचना गर्दैछन् धिमाल
व्यवसायीलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग
अनारको जुसले बढाउँछ यौन क्षमता
हर्टअट्याकबाट बच्न डाक्टरका १६ सुझा- डा. उज्वलविक्रम खड्का
दही र मोही कत्तिको खानुहुन्छ ?
डाक्टरी पेसा छोडेर जनजेतना फैलाउन विश्व साइकल यात्रा गरिहेका २ दाजुभाई अमेरिका आई पुगे
काखीमुनी सानो प्वाल पारेर ओपन हर्ट सर्जरी सफल
दुईहजार विद्यार्थीको मुटु परीक्षण
क्यान्सरलाई कसरी चिन्ने ? अनि जोगिने कसरी ?
पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप आजदेखि दिन सुरु